FJKM Ankadifotsy Ny ovy / Hainao ve / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Ny ovy07/06/2016 07:58
Soa maro no mety ho azo avy amin'ny fihinanana ny ovy.
Fangaron-daoka no tena ampiasantsika ny ovy. Fa mba fantatsika ve ny soa azo avy amin'ny fihinanana ovy? Raha sokajiana dia anisan'ny atao foto-tsakafo izy toy ny vary sy ny katsaka. Mora karakaraina koa ny ovy. Indreto misy soa vitsivitsy voalaza fa entin'ny ovy:
manampy amin'ny fanenana vatana: satria 26 kaloria monja no entiny ary ahitana "hydrates de carbone", ny tahan'ny siramamy ao anatiny dia ambany, ary mahatsapa feno ny vavony, toy ny voky hatrany ka tsy te-hihinan-kanina matetika.
Mampiena ny "stress" ny fihinanana ovy noho izy manana taha ambony dia ambony amin'ny vitamine B6, ary mamorona ny hormona atao hoe: "acide gamma-aminobutyrique"GABA koa izy izay manena ny fisian'ny stress sy mampitony ny atidoha ary manamora ny torimaso.
Ahitana: cuivre, manganèse, potassium ary vitamine B ihany koa ny ovy.Ny ovy manta dia mampitony ny mamaivay,
Mitahiry ny fahasalaman'ny tsinay koa izy, ny ovy handraona amin'ny lafaoro1 monja dia efa ahitana ny 12% ny fibre ilain'ny vatana isan'andro...